गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ? यसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन ! – ईमेची डटकम
त्यसैले नयाँ काम सुरु गर्नु अघी सबैभन्दा पहिले र ठुलो कुरा भनेको राम्रो आइडिया हो । राम्रो आइडिया पाउन निम्न आठ कुराको ध्यान दिनुहोस ।
प्रयास गर्नुहोस, तर नडराउनुहोस : मनमा जे आइडिया आउछ त्यसलाई प्रयोगमा पनि ल्याउनुहोस तर पारीणाम सँग नडराउनुहोस । यसरी नै सफल आइडिया आउछ ।
नेपालमै भेटियो ‘महादेव लुकेको’ अनौठो शिवथान लिङ्ग ?️